Ibhendi enkulu yangaphakathi ye-hose clamp band yangaphakathi
Ibhendi enkulu ye-hose clamp yaseMelika enendandatho engaphakathi iqukethe izingxenye ezimbili eziyinhloko, okuyizitayela ezinkulu ze-hose clamp yaseMelika kanye nendandatho yangaphakathi ethambile. Indandatho yangaphakathi eyakhiwe ngensimbi yenziwa ngokukhethekile ngensimbi engagqwali yensimbi engenasici ukuze kuqinisekiswe ukubekwa uphawu nokuqina.
Izikebhe ze-torque ezingama-Constant zinezinhlobo ezimbili zama-bandwidth, angama-14.2mm no-15.8mm, i-bandwidth eyi-14.2mm inamabili ama-pads entwasahlobo, kuthi i-bandwidth engu-15.8mm inamaphara ama-5 wepads wasentwasahlobo.
Ukukhishwa okusheshayo kwe-hose clamp yaseMelika
Umkhawulokudonsa okusheshayo we-hose clamp bandwidth yaseMelika kungu-12mm no-18.5mm, Ungafakwa kahle ezinhlelweni ezivaliwe okumele zivulwe ukuze zifakwe.
14.2mm uhlobo lwe-hose clamp yaseMelika
Lesi sikhonkwane siyinguqulo ethuthukisiwe yesitayela esivamile saseMelika, esine-bandwidth ka-14.2mm, futhi amandla ayo aphakeme kunalawo wesitayela esivamile saseMelika.
Uhlobo lwe-hose clamp yaseMelika eyi-12.7mm
Uhlobo lwe-hose clamp yaseMelika yohlobo lwe-12.7mm ifana ne-12.7mm uhlobo lwe-hose clamp yaseMelika. Yenziwe ngezinto eziqinile zokuqina, kepha kukhona isibambo esengeziwe esisebheni. Isibambo sinezinhlobo ezimbili: Umbala wensimbi nopulasitiki.I-Handle color ingafakwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Uhlobo lwe-hose clamp lwaseMelika olungu-12.7mm
Lesi sikhonkwane senziwe ngezinto ezinzima kakhulu, singakwazi futhi ukwenziwa ngokwezifiso ngosayizi odingwa yikhasimende. Kunezinhlobo ezimbili zesikulufa: ezejwayelekile nezingahambisani nokubuya.
Uhlobo lwe-hmm yaseMelika yohlobo lwe-8mm
Ikhampasi elincane laseMelika linomkhawulokudonsa owodwa kuphela we-8mm.Ngokulesihambisi esingasindi, udinga nje i-2.5NM ye-torque ekhuphukayo. Lesi sikhwama singanikeza ukusetshenziswa okuthembekile nokuhlala njalo, kunganikeza ingcindezi ephezulu yokubopha uphawu. Izikulufa zinemiphetho ephambene engu-6 no-6.3.
Uhlobo lwaseMelika uhlobo lokuqina olunzima
Umkhiqizo waseMelika wohlobo lwezinto ezisindayo ezisindayo une-bandwidth ka-15.8mm futhi uyisakhiwo sokukhiya esinamaphuzu amane esingadlulisela amandla okuqinisa angaphezulu kwebhande lensimbi elinezimbobo. Ngaphezu kosayizi etafuleni, futhi kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngosayizi olidingwa ikhasimende.